Sirinjeer Taayir Sare Leh Oo Loogu Talo Galay Warshada Isticmaalka Hal-abuurka | Sanxin
Sirinjiyada Sterile waxaa loo adeegsaday xarumaha caafimaadka ee gudaha iyo dibada muddo tobanaan sano ah. Waa shey bislaaday oo si ballaaran loogu isticmaalay cirbadaha hoose, xididada xididada iyo xididada bukaanka.
Waxaan bilownay baaritaanka iyo soosaarida siriinjiyada Sterile for Single Use sanadkii 1999 waxaana gudbnay shahaadada CE markii ugu horeysay Oktoobar 1999. Badeecada waxaa lagu shaabadeeyey hal xirmo oo lakab ah waxaana lagu nadiifiyey daawada loo yaqaan 'ethylene oxide' ka hor inta aan la keenin warshada. Waa hal adeeg oo jeermiska ka dhasha ayaa shaqeynaya seddex ilaa shan sano.
Muuqaalka ugu weyni waa Qiyaasta Go'an
Type Nooca dhexe ee biiyaha iyo nooca biiyaha eccentric, nooca isdabarka iyo nooca fur, nooca laba qaybood iyo nooca saddexda ah weel dhexdhexaad ah oo jilicsan, weel dhexdhexaad ah oo adag; leh irbad, irbad la'aan.
Qeexitaannada Ka bilow 1ml ilaa 60ml
Qeexitaanka cirbadaha Hypodermic ee cirbadaha cirbadda: Laga soo bilaabo 0.3mm ilaa 1.2 mm
Farogelinta firfircoon ee ku habboon qaybaha si loo hubiyo in badeecaddu aysan daadin.
Tayada wax soo saarka oo deggan, xakamaynta wax soo saarka otomaatiga ah oo buuxa.
Qalabka caaggu wuxuu ka samaysan yahay caag dabiici ah, usha asalka ahna waxay ka samaysan tahay walxaha badbaadada ee PP.
Specific Qeexitaannada oo dhammeystiran waxay buuxin karaan dhammaan baahiyaha duritaanka.
Bixi baakado jilicsan oo waraaqo-balaastig ah ah, waxyaabo deegaanka u roon, oo si sahlan loo furi karo.
jaakadu waa hufan, way fududahay in la ilaaliyo heerka dareeraha iyo goobooyinka, xiritaanka badeecada waa wanaagsan tahay, baxsi ma leh, nadiif ma leh, ma leh pyrogen
Qeexida irbadaha cirbadaha:
Hore: Nooca nabdoon ee cadaadiska wanaagsan ee tuubada IV
Xiga: Budada heemodialysis
Sirinjiga la tuuro ee Nadiifka ah
Cirbadaha Hypodermic Sterile
Sifeeyaha Sirinjiga Sterile
Sirinjiga Sterile ee Cirbadda
Toos u jooji saliingaha
Sirinjiye loogu talagalay tallaalka qiyaasta go'an